BODYGUARD'S RICHARD MADDEN ၏ဤပူပြင်းသည့်ရုပ်ပုံများကသင့်မျက်နှာပြင်ကိုလျက်ချင်စေလိမ့်မည် - သတင်း
Bodyguard's Richard Madden ၏ဤပူပြင်းသည့်ရုပ်ပုံများကသင့်မျက်နှာပြင်ကိုလျက်ချင်စေလိမ့်မည်
'အံ့ to စရာမဟုတ်ပေမယ့်ရစ်ချတ်မက်ဒင်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးလူဖြစ်မယ်ထင်တယ်' တွစ်တာမှအမျိုးသမီးတစ် ဦး က မင်းဘီဘီစီမှာ Bodyguard ကိုစောင့်ကြည့်နေရင်မင်းသဘောတူလက်မှတ်နဲ့ခေါင်းငုံ့နေလိမ့်မယ်။
ရာဇ ၀ တ်မှုဒရာမာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သူရစ်ချတ်မက်ဒန်သည်ယခုအချိန်တွင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အပူဆုံးလူသားဖြစ်သည်။ Robb Stark ကို Game of Thrones တွင်ကစားသူအဖြစ်လူသိများသောရစ်ချက်သည်ကျွန်ုပ်အားအိပ်စက်ခြင်း၌အိပ်မက်မက်ရန်အိပ်မက်မက်နေသောအိပ်မက်ဆိုးများ၊ လှိုင်းပုပ်သောအညိုရောင်သော့ခလောက်များနှင့်ကြွက်သားများနှင့်ရစ်ပတ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
သူ့မှာရှိတယ် Instagram ကိုအပေါ် 1.3m နောက်လိုက် နှင့်ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးသူကပိုထိုက်တန်ပါတယ်။ သေချာတဲ့လိင်လိုပဲ (ပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှာတွေ့ခဲ့သလိုပါပဲ) ဒါပေမယ့်မင်းကမင်းမှာရှိပါစေ မြင်တယ် Richard Madden ရဲ့ဒီပုံတွေက
မျှဝေသည် ရစ်ချတ် Madden 10:46 pm တွင် PDT မှာဇူလိုင်လ 9, 2018 ရက်တွင် (@maddenrichard)
@catsbrothers မှ 'n' Sniff Jumper ကိုခြစ်ပါ
မျှဝေသည် ရစ်ချတ် Madden 1:09 pm တွင် PST မှာဒီဇင်ဘာလ 15, 2017 ရက်တွင် (@maddenrichard)
ပါရီမှာမင်းဘယ်တော့မှစိတ်မပျက်ဘူး။ @abbiecornish မှဓာတ်ပုံ
မျှဝေသည် ရစ်ချတ် Madden 11:08 pm တွင် PDT မှာစက်တင်ဘာလ 28, 2017 ရက်တွင် (@maddenrichard)
??? #got #gameofthrones #cinderella #richardmadden #photoshoot #beautiful # crush #stagood # scotland #kinginthenorth # questiontion #interview #love #cute
@ မျှဝေသည့်ပို့စ်တစ်ခု မင်္ဂလာပါ 12:59 pm တွင် PDT မှာစက်တင်ဘာ 2, 2018 ရက်တွင်
ဤအချိန်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်ုပ်လမ်းလျှောက်နိုင်ရုံမျှမကချိုင်းထောက်များနှင့်စိတ်ဆင်းရဲအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီနေ့ငါ ၂၂ ကီလိုမီတာ (မာရသွန်တစ်ဝက်) ပြေးပြီးငါချစ်တဲ့အရာကိုလုပ်နေတာ (ပြီးတော့ငါ့ခြေထောက်ပေါ်ပြန်ရောက်နေတာ) ကိုပျော်ရွှင်ပြီးကျေးဇူးတင်မိတယ်။ #RunningNotRaving ဒါ့အပြင် ... ငါမြွေတစ်ကောင်ကျော်ကူးခဲ့ရတယ်၊ ???
မျှဝေသည် ရစ်ချတ် Madden 8:45 pm တွင် PDT မှာစက်တင်ဘာလ 11, 2017 ရက်တွင် (@maddenrichard)
ငါတို့မသိခင်သန်းခေါင်? #friday #kimono #somethinggotmestarted #fridayfeeling #electrify
မျှဝေသည် ရစ်ချတ် Madden 4:07 pm တွင် PST မှာဖေဖော်ဝါရီလ 17, 2017 ရက်တွင် (@maddenrichard)
စနေနေ့တိုင်းမဂ္ဂဇင်းအတွက် @maddenrichard ရိုက်ချက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရိုက်ချက်မှထွက်ပါသည်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာအရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ ဆံပင်inရိယာအတွင်းရှိ @hannahlouiserogers နှင့် Glaswegian စကားပြောခြင်းသည် @pollyvernon ၏ @ charley.mcewen စကားလုံးများဖြစ်ပြီး @loft_studios x တွင်ရိုက်ချက်သည်အပတ်စဉ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်
မျှဝေသည် ဒန်ကနေဒီ 12:31 pm တွင် PDT မှာစက်တင်ဘာလ 4, 2018 ရက်တွင် (@dankennedyphoto)
မျှဝေသည် ရစ်ချတ် Madden 8:21 pm တွင် PDT မှာAprပြီ 11, 2018 ရက်တွင် (@maddenrichard)
ဤပုံသည်အလွန်တင့်တယ်သည် ?? @lilyjamesofficial @maddenrichard
မျှဝေသည် လီလီဂျိမ်းစ် 5:06 pm တွင် PDT မှာစက်တင်ဘာ 1, 2018 ရက်တွင် (@lily_james_fp)
ထိုနေ့၏လူသည်ရစ်ချတ် Madden ဖြစ်ပါတယ်။ Game of Thrones ရှိသူ၏ Robb Stark ၏လူသိများသောကြောင်သည် Ibiza၊ Paris၊ Attack on Paris ရုပ်ရှင်ကားကိုလည်းရိုက်ကူးခဲ့ပြီးဘီဘီစီ One's Bodyguard စီးရီးတွင်ပါ ၀ င်သည်။ မနေ့ကကျွန်ုပ်စီးရီးကိုစကြည့်ခဲ့ပြီး၊ ငါ့ကိုယ်ရံတော်ဖြစ်သလော အံ့သြစရာ သင်ဒါကိုကြိုက်လား? ပျော်ရွှင်စွာခံစားပါ ?? #richardmadden #homemdodia #homaodaporra #hemenqueamamos # soufã #style #homensestilosos #adoro #ahdelicia #vemnimim # ohláemcasa # ထူးခြား #got #gameofthrones #bodyguard #hbo #bbcone #bbcc
မျှဝေသည် နေ့၏လူ 8:03 pm တွင် PDT မှာသြဂုတ်လ 31, 2018 ရက်တွင် (@homemdodia)
မြင်ကွင်းနောက်ကွယ်မှာ @mrporterlive @mrp တောက်ပနေသောချောမောသော @maddenrichard နှင့်ရိုက်ကူးပါ။ ဘီဘီစီ၏တောက်ပသော #Bodyguard ၏ ?? လာမည့်ကြာသပတေးနေ့အင်တာဗျူး & တက်ရိုက်
မျှဝေသည် ဂျယ်ရမီ Langmead 3:20 pm တွင် PDT မှာသြဂုတ်လ 31, 2018 ရက်တွင် (@jeremylangmead)
ရစ်ချတ်မက်ဒန် (@maddenrichard) မျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု 11:56 pm တွင် PDT မှာAprပြီ 15, 2018 ပေါ်မှာ
️ရစ်ချတ်သည် The Times Magazine တွင်ပါ ၀ င်ပြီး၊ ယူကေရှိ Bodyguard စီးရီး၏အောင်မြင်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ #RichardMadden #RichardMaddenBrasil
မျှဝေသည် ရစ်ချတ် Madden ဘရာဇီး 8:13 pm တွင် PDT မှာစက်တင်ဘာ 1, 2018 ရက်တွင် (@richardmaddenbrasil)
၁) တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု Josh Dylan: Mamma Mia2ရှိ Bill ငယ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ခင်ပွန်းလောင်း
နှစ်) တွေ့ဆုံ Molly Moorish: Liam Gallagher ရဲ့ရိုင်းစိုင်းသောသမီး, သင်အမြဲဖြစ်ချင်သောမိန်းကလေး
၃) Peter Kavinsky ခေါ်နောမိ Centineo နှင့်တွေ့ဆုံပါ